OneSignal: Tinye Ntugharị Ntugharị site na Desktọpụ, Ngwa, ma ọ bụ Email | Martech Zone
N’ọnwa ọ bụla, m ga-enweta puku mmadụ ole na ole na-alọghachi site na ihe nchọgharị anyị na-agbakwunye. O di nwute, ikpo okwu anyi hoputara ugbua na emechi ugbua ka m gha chota ohuru. Kasị njọ, ọ nweghị ụzọ isi ebubata ndị debanyere aha ochie ahụ na saịtị anyị ka anyị wee nwee nsogbu. N'ihi nke a, achọrọ m ịhọrọ ikpo okwu a maara nke ọma na nke nwere ike ịba. Achọtara m ya na OneSignal.
Ọ bụghị naanị na OneSignal ime push forma Ọkwa n'ihi nchọgharị, ha na-a onye-nkwụsị shop maka push ificationsma Ọkwa site mobile ngwa ma ọ bụ site na email dị ka nke ọma.
Gịnị bụ a Push ngosi?
Otutu ahia dijitalụ jiri Dọọ teknụzụ, nke ahụ bụ onye ọrụ na-arịọ arịrịọ na sistemụ ahụ na-aza ozi a rịọrọ. Otu ihe atụ nwere ike ịbụ ọdịda peeji nke onye ọrụ na-arịọ maka nbudata. Ozugbo onye ọrụ nyere ụdị ahụ, a na-ezigara ha email na njikọ nke nbudata ahụ. Nke a bara uru, mana ọ chọrọ ka atụmanya rụọ ọrụ. Ushma Ọkwa bụ nkwenye ikike dabere na ebe onye na-azụ ahịa ga-ebido ịrịọ arịrịọ ahụ.
Ndị a bụ ụfọdụ ihe atụ nke ọkwa ịkwanye:
Desktọpụ Push ificationsma Ọkwa - nchọgharị ọgbara ọhụrụ na-enye ohere ka Kwaa ngosi. Dịka ọmụmaatụ, na saịtị a, a jụrụ onye bịara na nke mbụ ma anyị nwere ike izigara ha ọkwa nkwanye. Ọ bụrụ na ha kwadoro, oge ọ bụla anyị bipụtara ọkwa ọhụrụ ha na-enweta ọkwa desktọọpụ.
Nkwupụta Mgbasa Ngwa Ngwa Ekwentị - mobile ngwa nwere ike gwa mobile ọrụ site push ngosi. Otu ngwa mkpanaka m nwere mmasị na iji ya bụ Lee, n'ihi na ọ na-agụ kalenda m ma gwa m - dabere na okporo ụzọ - mgbe m kwesịrị ịhapụ ịbịaru nzukọ ọzọ m n'oge.
Akpalite Email Push ushma Ọkwa - Ọ bụrụ na ị nyere iwu site na Apple, ị ga-enweta ozi ịgha aka na-eme ka ị mara mgbe ejiri ngwugwu gị na mgbe ọ na-aga ebe ọ na-aga.
OneSignal na-enye ụfọdụ atụmatụ ndị na-enweghị atụ ma e wezụga nhọrọ obe-ikpo okwu yana ọnụahịa ike ike:
Nkeji 15 - ndị akaebe na - ekwupụta na ọ dị mfe ịmalite.
Real-Oge Ndepụta - Nyochaa ntughari nke ọkwa gị na ozi ịntanetị na ozugbo.
scalable - Ọtụtụ nde ndị ọrụ? Anyị emechiela ha niile. Anyị na-akwado ọtụtụ ngwaọrụ yana isi SDK niile.
Ozi A / B Ule - Nyefee ozi nnwale abụọ na ngalaba nke ndị ọrụ, wee zipụ nke ka mma na ndị ọzọ.
Icheta Nkewa - Mepụta amamọkwa na ozi ịntanetị nkeonwe, ma nyefee ha ndị ọrụ ọ bụla n'oge dị mma n'oge ụbọchị.
Mbugharị akpaaka - Nịm ya ma chefuo ya. Na-ezigara ndị ọrụ ihe ngosi dị mkpa na akpaghị aka.
Na mgbakwunye na API siri ike, Ntinye ngwa ngwa, na ngwa mmepe ngwanrọ (SDKs) iji jikọta ngwa ngwa, OneSignal na-enye nnukwu njirimara ọrụ maka ndị na-ere ahịa ka ha zigakwa ọkwa nke ha kwa. Ha na-enyekwa n'ime njikọta igbe na SquareSpace, Joomla, Blogger, Drupal, Weebly, Wix, Magento, na Shopify.
Debanye aha na Free na OneSignal
Tags: ab nwalee push notma ọkwaBloggerihe nchọgharịobe-ikpo okwu inupụ ificationsma Ọkwadesktọọpụ ngosiDrupalJoomlamagentomobile ngwa ngosiebe ngosiotuinupụ apipush ngosipush ngosi apipush ngosi ngwa mgbakwunyeezigbo oge push nsusoSafari ngosiscalable push ificationsma Ọkwanke push notma Ọkwaụlọ ahịasquarespacekpaliri emailozi weebụwee jirikwa yawixwordpress plugin